Rio Ferdinand oo sharraxay sababtii uu isaga diiday ku…
By jojo Last updated Apr 9, 2020
(Manchester) 09 April 2020. Difaacii hore ee kooxda Manchester United, Rio Ferdinand ayaa sheegay inuu mar iska diiday ku biirista kooxda Barcelona intii uu ku sugnaa Old Trafford.
Xiddigii hore ee qaranka England oo waqti qurux badan ku qaatay kooxda Man United kaddib 12 sano oo uu ku sugnaa halkaas, waxaana uu la gaaray guulo waa weyn.
Fasal ciyaareedkii 2007-08 ayuu Ferdinand tartanka UEFA Champions League kula guuleystay kooxda Red Devils, iyagoo final-ka ku garaacay kooxda Ingiriiska kala dhisan ee Chelsea, waxaana xusid mudan in wareeggii semi-finalka ay ku reebeen kooxda Barcelona si ay kama dambeysta ugu ciyaaraan Ruushka.
Balse ka hor lugtii labaad ee wareegga nus-dhammaadka, Rio waxa uu yabooh ka helay kooxda reer Spain, iyadoo macallinkii xilligaas hoggaaminayay Barca ee Frank Rijkaard uu si daran u xiiseynayay qaab ciyaareedkii halyeyga Man United.
“Waan ku dhowaaday, waxaana kala dooday arrintaas wakiilkeyga, Barcelona ujeeddada ay igala hadleen, balse Rijkaard ma aanan kala hadlin inaan halkaas aado, waxaana rijkaard kala hadlay inaan ogaado dareenkiisa ee ma aysan ahayn inaan halkaas aado.” ayu Ferdinand u sheegay BT Sport.
Waxa uu Ferdinand sidoo kale xaqiijiyay in kulankooda uu ka dhacay halka laga galo garoonka markii ay soo idlaatay ciyaartii lugta hore ee k usoo dhammaatay barbaraha goolal la’aanta ahayd.
“Mar walba waxaan sheegi jiray inaan jeclahay inaan bannaanka ka soo ciyaaro, balse kaliya hal arrin ay igu celin kartay oo ah inaan koobab iyo guulo aan ka helo kooxda aan la jiro, waxaan nasiib u yeeshay inaan ka mid noqday koox weyn oo ah Manchester United oo u muuqatay mid aysan macquul ahayn inaan ka tago.” ayuu hadalkiisa ku sii daray difaacii hore ee qaranka Ingiriiska.
Kaddib sanad ciyaareedkaas uu United kula guuleystay Champions League, waxa uu Ferdinand soo gaaray final-ka tartankaas labo jeer oo kale, waxaana labadaas jeerba koobka kooxdiisa ka qaadday Barcelona.
Balse sida uu carrabka ku dhuftay kama shallaynayo sii joogista United, maadaama uu saddex horyaal oo dheerraad ah kula guuleystay ka hor inta uusan 2013 ka tagin Old Trafford.
Ferdinand ayaa ku micneeyay diiditaanka dalabkii kaga yimid Barca maadaama uu isaga garaacay kaddibna koobkii ay ku tartamayaan ku guuleystay, waxaana isagoo sheekadiisa ka faalloonaya uu yiri: “Iyaga ayaan garaacnay, waxaana noqonnay horyaalka Yurub, maxaan uga baahanahay inaan iyaga ku biiro?”
“Xilligaas Xavi, Iniesta iyo Messi waxay ahaayeen dad ku jiro da’da 20-aadka, markaas ayay soo hana qaadayeen, ma aysan ahayn ciyaartoyda ay saddex sano ama afar sano kaddib noqdeen.” ayuu dooddiisa ku sii daray Ferdinand.
Xiddigii hore ee Manchester United ayaa hoosta ka xarriiqay inuu xushmad badan u hayay Frank Rijkaard, balse guulaha uu ku haystay kooxda reer England ay sabab u ahayd inuu isku diido ku biiritaanka Camp Nou.